Guddiga doorashada Galmudug oo shaaciyey qorshahoda soo xulidda xildhibaanada dhiman – Hornafrik Media Network
Gudoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug Cabdinaasir Gelle Cilmi oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in hada kadib ay bilaabayaan soo xulidda xubnaha ka harsan baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Guddoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyey inay xaliyeen dhamaan tabashooyinkii ay qabeen beelaha Galmudug.
Sidoo kale tabashadii Ahlu-Sunna oo sida uu sheegay xalinteedu waqti badan ay ka qaadatay ayuu sheegay inay xal buuxa ka gaareen, isla markaana ay maalmo ka hor ka aqbaleen 20-kii xildhibaan ee ay soo xusheen.
Guddoomiyaha guddiga farsamada ayaa sidoo kale sheegay inay Arbacadii maanta bilaabeen xaqiijinta iyo tababarka odayaashii soo xuli lahaa xubnaha ka harsan baarlamaanka labaad ee Galmudug.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa sheegay in dhawaan ay ku dhawaaqayaan 69-ka xildhibaan ee ka dhiman soo xulidda xubnaha baarlamaanka Galmudug.
Baarlamaanka Galmudug oo ka kooban sida dastuurka maamulkaas uu dhigayo 89-kursi ayaa hada waxaa la shaaciyey oo kaliya 20 xubnood oo qoondo ahaan loo siiyey Ahlu-Sunna Waljamaaca, kuwaas oo dhawaan ay ogolaatay dowladdu, kadib markii ay soo magacaawday Ahlu-Sunna.